Posts for 2012 | Mozilla Myanmar | Page 2
Opening the mobile web mozilla and firefox OS at DevCon2012
Hello Mozillian, Thank for visiting our Mozilla Myanmar website. I hope you will know about we attend #DevCon2012 at Friday 14 Spet 2012. Here is short post of our session . Fortunately we took session at the first day … Continue reading
Tags: firefox for android
Invite DevCon 2012 Yangon
Hello Mozillain! Today I would like to invite you (officially) to our Mozilla Myanmar will be participate at DevCon2012 which will held Sep14 to Sep16 at Myanmar Infor Tech, Yangon,Myanmar. And also last week I got confirmation for shipping swag … Continue reading
Tags: B2G, DevCon2012, event, HTML5, Myanmar, Yangon
၂၀၀၉ ပြည့်နှစ်နှောင်း ပိုင်းလောက်ကစပြီးHTML5 ကိုစတင်သိရှိလာကြပါတယ်၊ဒီနေရာမှာ HTML ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာက စပြီး အကျယ်တ၀င်ရှင်းပြလိုပါတယ်။ HyberText Markup Language လို့ ခေါ်တဲ့ HTML ဟာ ၁၉၉၁ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းက Tim Berners-lee စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Web Site ခေတ်စားလာတဲ့နောက်ပိုင်း Web လောက ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ အညီ HTML ဟာ လည်း လူသိများလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်မြင်တွေ့ အသုံးပြုနေကြ သတင်းစာ၊ စာအုပ်၊ မဂ္ဂင်းဇင်း စတာတွေကို Web … Continue reading
About Boot to Gecko
B2G အတွက် ဆောင်းပါရေးပေးဖို့ NeMo မှာ လုပ်နေတုန်းမှာပဲ ဟို အရင်တုန်းက အကီနို B2G နဲ့ပတ်သတ်ပြီးရေးခဲ့တာလေးကိုပါပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။February လက စပိန်နိုင်ငံ ဘာဆီလိုနာ မှာ ပြုလုပ်တဲ့Mobile World Congress မှာ Mozilla ကBoot to Gecko အ​​ကြော12:21 PM 8/2/2012င်းကို စတင် မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။Boot to Gecko ဆိုတာ is the development ofa‘complete, standalone operating system … Continue reading